Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 23, 2021 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်တွင်စာလုံးပေါင်းအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ SMS style ဘာသာစကားသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံသောဖိုင်များကြားတွင်ပင်လက်ခံရန်ဝေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အရေးအသားတွင်အားစိုက်ထုတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏စာလုံးပေါင်းပျင်းရိမှုကိုမခံချင်ပါက။ မည်သူမဆို၊ စားဖိုမှူး၊ ဖောက်သည်များကသင့်အားအလေးအနက်ထားရန်ခက်ခဲသည်။ သင်၏အီးမေးလ်များသည်စနစ်တကျအမှားအယွင်းများပြီး CM2 အဆင့်အထိနာကျင်စွာရောက်နေပါက။
အမှားလုံးဝမရှိသည့်ပန်းတိုင်ဖြင့်သင်၏စာလုံးပေါင်းအဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်။ နည်းလမ်းများစွာသည်ဖြစ်နိုင်ပြီးသင်လုပ်ချင်သောအချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့က Beshrelle ကို ၀ ယ်ကြသည်။ သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းမှာ Bernard PIVOT ကဲ့သို့သောသတ်ပုံခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စာလုံးပေါင်းကိုကျွမ်းကျင်ရန်သင်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသင်၏ကွာဟချက်များကိုဤနည်းဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်ဟုမထင်ပါက။ ကဲ့သို့လျှောက်လွှာကြိုးစားပါ ဗော်တဲယားစီမံကိန်း, သွားတု, Orthofolie ။ ဤသည်သည်သင်၏သင်ယူမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ပို၍ ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏စာလုံးပေါင်းအမှားများကိုသိသိသာသာလျှော့ချလိုပါကပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရမည်။ သင်၏စာသားများကိုစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စနစ်တကျပြန်လည်ဖတ်ရှုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတို့သည်စက်ရုပ်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ 100% ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်ကြောင်းမမေ့ပါနှင့်။
Cordial pro သို့မဟုတ် Antidote ကဲ့သို့သောပေးဆောင်သည့်စာဖတ်သူများသည်သဘောတူညီမှုသို့မဟုတ်သဒ္ဒါအမှားများကိုလွတ်သွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကစာလုံးပေါင်းမှားတာ၊ inတ္အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်မှားသောနောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းသည်စကားလုံးတိုင်းကိုမှန်ကန်စွာစာလုံးပေါင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။
ဖတ်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာတွင် အသုံးပြုသည့်ကုဒ်များကို သိပါ။
သင်၏အီးမေးလ်များ၊ အစီရင်ခံစာသို့မဟုတ်သင်၏အက္ခရာများကိုဖတ်ရှုမည့်သူအများစုသည်။ ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးစာလုံးပေါင်းအမှားကိုရှာဖွေနိုင်သည့်အထူးကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ပြင်သစ်စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါနှင့်သက်ဆိုင်သောလူသိများသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းမပြုမီ။ နေ့စဉ်လုပ်သောအမှားများကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ သင်၏အပျက်သဘောဆောင်သောပုံကိုပြန်ပေးရန်သေချာသည့်အမှား။ စာမဖတ်တတ်သူ၊ စာရေးတတ်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့သူ။ အကယ်၍ သင်သည်အလေးအနက်ထားခြင်းမခံရပါက၎င်းသည်သင်၏အလုပ်အကိုင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေအနေတွင်စာလုံးပေါင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ စာလုံးပေါင်းစည်းမျဉ်းများကိုပြန်လည်ရှာဖွေခြင်းကိုပြီးစီးရမည်။ ဝေါဟာရအသုံးပြုခြင်းနှင့်အခြေအနေအားလုံးတွင်သင့်တော်သောအသံများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမပြုရပါ။ စာလုံးပေါင်းနှင့် conjugation ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စုံလင်သောစာကြောင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး။ ဒါပေမယ့်တရားဝင်ကိုဘယ်မှာအသုံးပြုသည်, တရားဝင်အသုံးပြုသင့်တယ်ဘယ်မှာ။ ထို့အပြင်သင့်အားအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့်မတည်ငြိမ်မှုများပါဝင်သည်။ ထိရောက်သောနှင့်အပြစ်အနာအဆာမရှိသောအရေးအသားဖန်တီးရန်လမ်းကြောင်းသည်မလွယ်ကူလှပါ။ သို့သော်၎င်းကိုသင်ယူလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုကြီးမားသောအမြင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
"-Ently" သို့မဟုတ် "-ently"?
"မင်းကိုပြောနေတာ" လား၊ - ဗော်တဲယားစီမံကိန်း
"သင်ပြော" သို့မဟုတ် "သင်ပြော"?
"Way" or "voice"?
"ကြည့်ပါ" သို့မဟုတ် "ကြည့်ပါ"?
"နှစ်ဆယ်" သို့မဟုတ် "နှစ်ဆယ်" လော။
"သွား" သို့မဟုတ် "သွား"?
"Go" or "go"?
"တစ် ဦး ကအရည်အသွေး" သို့မဟုတ် "အရည်အသွေး"? "ချစ်ကြည်ရေး" သို့မဟုတ် "ချစ်ကြည်ရေး"?
"A" သို့မဟုတ် "a" မျိုးလား။
"တစ် ဦး ကတင်ပို့" သို့မဟုတ် "တစ်တင်ပို့"?
"တစ် ဦး လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်" သို့မဟုတ် "တစ် ဦး လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်"?
"သင် sort" လား "sort"?
"မင်းစားလား" လား "သင်စားသည်"? "သင်စားလိမ့်မည်" သို့မဟုတ် "သင်စားလိမ့်မည်"?
ဗွီဒီယိုဖြင့်သင်၏စာလုံးပေါင်းအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပါ မတ်လ 5, 2021Tranquillus
အောက်ပါနို့တိုက်ခြင်း - ကျွန်ုပ်၏တာဝန်ဝတ္တရားများကဘာတွေလဲ။